युवककाे बाईकमा लिफ्ट मागेर हिँडेकी,यी नर्सकाे जीवनमा पत्याउनै मुस्किल पर्ने घटना पुरापढी अरुलाईनि शेयर गर्नुहोस – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/युवककाे बाईकमा लिफ्ट मागेर हिँडेकी,यी नर्सकाे जीवनमा पत्याउनै मुस्किल पर्ने घटना पुरापढी अरुलाईनि शेयर गर्नुहोस
अनि अगाडि बढेउँ हामी। अब बाइकको रफ्तार पहिले जस्तो रहेन, स्पिड चलाउँदा उनको कपाल उडेर बि’ग्रिन्छ की भनेर विस्तारै चलाउदै थिएँ। कुरा गरे नि मज्जाले सुनिन्छ भन्ने तरिकाले चलाउँदै थिएँ। आफूले केही सोध्न सकिनँ, उनले केही सोधुन् भन्ने चाहाना थियपहलवानपुर पुगिसक्यौँ, केही सोधिनन्।
घोडाघोडी तालको बाटो हुँदै सुख्खड, सांढेपानी मुढा हुँदै बर्दगोरिया अनि लम्की पुगियो। लम्कीमा अलि बाइक स्लो भयो, अलि भी’ड’भाड भएकै कारण। उनले मौका पाउने बित्तिकै फेरि प्रश्न गरीहालिन्, ‘नास्ता खाने की?’मैले चिसापानीमा खानु पर्छ भनेँ। उनले हुन्छ भनिन् अनि अगाडि बढेँ। मनमा कुराहरु खेल्न थाले।
चिसापानी पुग्यौँ। ‘नास्ता खाउँ अब रोक्नुस्, थाक्नु नि भयो होला’ उनले भनिन्। मैले हुन्छ भनेँ र रोकिएँ। नास्ता खाने एक पसल भित्र गएँ, फ्रेस भएर बसेँ। बाइकको हावाले होला, उनको कपाल बि’ग्रीसकेको थियो, गाजल अलि अलि बगेको थियो। बाइकको हावा लागेर आँसु आएर होला।
लास्टै कमेडी मान्छे हुनुहुँदो रैछ, यस्तो हँसाउने मान्छे पाउने वाला तपाईको वाइफ लास्टै भाग्यमानी हुन्’ उनले हाँस्दै भनिन्। मैले नि मौकामा चौका मा’रिहालेँ, ‘आजसम्म त्यो भाग्यमानी भेट्टिएकै छैनन्, त्यो भाग्यमानीको भ्याकेन्सी खाली नै छ।’अब मैले नि थाहा त पाउनु पर्यो की उनको बोइफ्रेन्ड छ की नै भनेर। ‘तपाई जस्ती राम्री नर्स पाउने तपाईको बोइफ्रेन्ड पनि त भाग्यमानी नै हुन् नि।’
मैले नि मौकामा भनिहालेँ, ‘समयमै ट्राइ गरिहाल्नुस् क्यारे, अहिले भ्याकेन्सी नि खाली छ।’उनले मेरो प्रश्नको उत्तर केही नदिएर ‘हिन्नु अब’ भनिन्। पैसा तिर्ने समय आयो, मैले पैसा तिर्दैथिएँ मलाई ‘पैसा ति’र्न दिनु भएन, पछि कुनै दिन तपाईलाई मौका दिन्छु’ भन्दै आफै तिरिन्।
मैले हाँस्दै भनेँ, ‘भयो, मलाई म’र्नु छैन।’ बाइक आफै चलाएँ, उनी पछाडि नै बसिन्। उनले फेरि भनिन्, ‘कस्तो कास्ट के तपाईको खडायत, मैले पहिलो पटक सुनेको’ भनिन्। मैले नि भनेँ, ‘मेरो नामको पछाडि त राम्रै देख्या छ, तपाईको नामको पछाडि ट्राइ गर्नुस् न कस्तो देखिने रैछ?’
बासगढी पुग्यौँ र समान्य कुरा गर्दै हामी कोहलपुर पुग्यौँ। नेपालगन्ज पुगेपछि उनले धम्बोजिमा झर्ने कुरा गरिन्।धम्बोजी पुगियो, उत्रेर सबैभन्दा पहिले मेरो नम्बर मागिन् अनि उन्ले फेरि सोधिन् ‘प्लिज, भन्नु न तपाई के गर्नुहुन्छ?’मैले अब धेरै घु’माउन मन लागेन. सिधैँ उत्तर दिएँ, ‘रिजनल म्यानेजर इन मेडिसिन कम्पनी।’
मलाई विश्वास नै थिएन, मोबाइल नम्बर थियो। फोन गर्ने आँट नै आएन।तपाईं को भनेर फोन उठाउनेले सोध्दा मसँग उत्तर थिएन, छ’ट्पटाइरहेको थिएँ। यत्तिकैमा ट्याग गर्ने केटीको रिप्लाइ आयो- या’क्सिडेन्ट भएर। मैले कसरी भनेर सोधेँ, उनको जवाफ आयो- घरबाट आउदै थिइ, धम्बोजी पुगेपछि अटोमा आउँदा ट्रकले ठ’क्कर दिएछ, हस्पिटलसम्म नि लग्न पाएनौँ।
जीउ सि’रिङ्ग भयो, अँखाबाट कतिखेर आँसु आयो पत्तो नै भएन। अरु धेरै केही सोध्न मन लागेन। उनकी साथीले अर्को म्यासेज गरिन्- तपाई को? मैले म्यासेज सीन गरेर छोडेँ, उत्तर मसँग थियो तर दिनै मन लागेन।जिवनमा धेरै मान्छेलाई लिफ्ट दिइयो तर उनीसँग त्यो बाटोमा बिताएका पल, उनको त्यो एकोहोरो बोलिरहने बानी। दैव पनि कस्तो रैछ, यतिसम्म नि’ष्ठुरी हुने रैछ।